मेस्सीले बार्सिलोनाको सम्झौतामा अझै गरेनन् हस्ताक्षर ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
मेस्सीले बार्सिलोनाको सम्झौतामा अझै गरेनन् हस्ताक्षर !
Posted by Headline Nepal | ८ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०९:२५ |
८ मंसिर, काठमाण्डौं । स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले क्लबसँगको नयाँ सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन् । गएको जुलाईमा मेस्सीले सन् २०२१ सम्मका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बार्सिलोनाले जनाए पनि अझैसम्म हस्ताक्षर नभएको हो ।
मेस्सीले अहिलेसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नुले उनी आउँदो जनवरीको ट्रान्सफरका बेला अरु क्लबसँग सम्झौता गर्न खुला देखिएका छन् । बर्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउले यो कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नरहेको र मेस्सीले नयाँ सम्झौता गरिसकेको दाबी गरेको इएसपिएनले जनाएको छ । बार्टोमेउका अनुसार मेस्सी सन् २०२१ सम्म बार्सिलोनामा अनुबन्धन भएका छन् ।
बार्सिलोनाका खेलाडी डेनिस स्वारेजले मेस्सीसँगको सम्झौतामा अझै हस्ताक्षर नहुनुले खेलाडीमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । उनले त्यस विषयले बार्सिलोनाका अन्य खेलाडीलाई असर नपरेको र मेस्सी बार्सिलोनामै रहने बताएका छन् । उनले मेस्सी लामो समय अझै बार्सिलोनामै रहने दाबी पनि गरे ।
सम्झौता पत्रमा मेस्सीका बुबाले हस्ताक्षर गरिसकेको र त्यसको फोटो केही दिनमा बाहिर आउने बर्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफले बताएका थिए । तर अझै सम्झौताको प्रमाण भेटिएको छैन । गएको ट्रान्सफर सिजनमा मेस्सी इंग्लिस क्लब म्यानचेष्टर सिटी जाने हल्ला पनि चलेको थियो । मेस्सीले बार्सिलोनामा नयाँ सम्झौताका लागि पुर्नविचार गर्ने तयारी गरेको स्पेनिस पत्रिका डाएरिओ गोलले दाबी गरेको छ ।
Previousवाम गठबन्धनको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी धनकुटामा वम विष्फोट !
Nextछिमेकी झगडामा एक घाइते, घटना राजनीतिकरण
बिर्तामोडमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू !
१० कार्तिक २०७४, शुक्रबार १४:५२
‘काँग्रेसकै कारण मुलुक संकटमा’ : अध्यक्ष थापा
२१ जेष्ठ २०७४, आईतवार १४:३३
श्रीमानले भने : ‘ मलाई माफ गरिदेऊ , मबाट ठूलो गल्ती भएको छ…’
२५ कार्तिक २०७४, शनिबार ०९:०९
थाइल्याण्डमा गैँडाका २१ वटा खाग बरामद
२ चैत्र २०७३, बुधबार ०८:३५